कोरोनाबाट बच्न सुनको मास्क बनाएर लगाउने शंकर को हुन् ? – ramechhapkhabar.com
कोरोनाभाइरसको महामारीका बीचमा केही रोचक घटनाहर पनि भइरहेका छन् । केही रोचक तस्वीरहरु सामाजिक संजालमा भाइरल भइरहेका छन् । यही बीचमा अहिले सामाजिक संजालमा सुनको मास्क लगाएका एक व्यक्तिको तस्वीर भाइरल भइरहेको छ ।समाचार एजेन्सी एएनआइका अनुसार यी व्यक्ति महाराष्ट्रका शंकर कुराडे हुन् । उनलाई गोल्डेन म्यान भनेर पनि चिनिन्छ । सुनका गहना लगाउन सौखिन शंकरले सामान्य समयमा पनि करिब ३ किलो सुनका गहना लगाएर हिँड्छन् ।
शंकरले अहिले बनाएको मास्कको तौल ५० ग्रामभन्दा धेरै भएको बताइएको छ । यो मास्क २ लाख ८९ हजार भारतीय रुपैयाँ मूल्यको भएको उनले बताएका छन् । शंकरका अनुसार यो मास्कमा साना साना प्वालहरु बनाइएको छ ताकि सास फेर्न कठिन नहोस् । यद्यपि यो मास्क प्रभावकारी हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषयमा आफू नै विश्वस्त नभएको उनले बताएका छन् ।
यी सपना देख्नुभयो भने मिल्छ लक्ष्मी माताको कृपा, चाडै बन्नुहुनेछ धनी !
हरेक ब्यक्तिले निदाएको बेला सपना देख्ने गर्दछन्। धार्मीक मान्यता अनुसार हर सपनाको केहि न केहि अर्थ रहने गर्दछ यस प्रकारका सपनाले ब्यक्तिको जीवनमा घट्ने घटनाको अग्रीम जानकारी गराउने मान्यता छ। यस्ता सपनामा देखियो बस्तु वा स्थानले मानिसमा सकारात्मक वा नकारात्मक दुबै प्रकारका असर पार्ने गर्दछ। कतिपय सपनाले मानिसमा धनलाभको समेत संकेत गर्दछ।
कुन -कुन सपनाले मानिसलाई धनवान् बनाउने संकते गर्छ त ?यदि सपनामा कसैले बिरालो, उल्लु र घोडा देख्यो भने ती ब्यक्तिउपर माता लक्ष्मीको कृपा बर्सिने मान्यता छ । यदि सपनामा आफुले घोडसवारी गरेको देखियो भने आगामी भाग लिएको प्रतियोगितामा सफलता पाउने मान्यता छ ।सपनामा घोडा चढेको देखेमा रोकि’एको पैसा छिट्टै फिर्ता हुने मान्यता रहेको छ।सपनामा माता लक्ष्मी वा भवानीको दर्शन गरेको देखेमा छिट्टै धनवर्षा हुने मान्यता छ ।
यदि सपनामा कसैले आभूषण धारण गरेको वा खरीद गरेको देखे भविष्यमा अधिक धनवान हुने संकेत गर्दछ।यदि सपनामा कमलकोफूल धारण गरेको देखे या अरुले फुल भेटगरेको देखेथालेको काममाअपार सफलता प्राप्त हुनेछ ।
यदि सपनामा साना उमेरमा बालिका देखे देवीशक्तिको विशेष कृपा हुनेछ। कसैले सपनामा मन्दिरको दर्शन गरेको देखे त्यो अत्यन्त शुभ मानिन्छ ।
यदि सपनामा मन्दिर देखेमा आउने स’मयनिकै शुभ हुनेछ भन्ने संकेत मानिन्छ ।सपनामा कुलदेवताको दर्शन गरेको देखेमा जीवनमा विद्यमान सबै कष्ट, संकट नाशभएर जाने मान्यता छ ।